धर्मनिरपेक्षता मैले घुसाएको होइन : सुवास नेम्वाङ | Sabaiko Online
Home Flash News धर्मनिरपेक्षता मैले घुसाएको होइन : सुवास नेम्वाङ
धर्मनिरपेक्षता मैले घुसाएको होइन : सुवास नेम्वाङ
काठमाडौं । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि हुर्किएको नयाँ पुस्ताको दिमागमा सभामुख भनेकै सुवास नेम्वाङ र सुवास नेम्वाङ भनेकै सभामुख भन्ने छाप परेको छ । नेम्वाङपछि दुई वर्षको बीचमा दुईजना सभामुख फेरिँदा पनि १० वर्षसम्म लगातार चार पटक सभामुख र संविधानसभा अध्यक्ष बनेका नेम्वाङलाई अहिले पनि नयाँ पुस्ताले सभामुखकै रुपमा बुझ्छन् ।
सुवास नेम्वाङ सभाभुख र संविधानसभा अध्यक्षका रुपमा यसकारण पनि स्मरणमा रहने पात्र हुन् कि नेपालबाट राजतन्त्रको पखेटा काट्नेदेखि गणतन्त्र घोषणासम्म गर्ने संसदको नेतृत्व उनले गरेकै हुन् । सभामुख र संविधानसभा अध्यक्षको आसनबाट गरेको उनका घोषणामध्ये कतिपयको जवाफ आज पनि उनले दिनु परिरहेको छ ।
विशेष गरी राजासँगको सम्झौतामा धोखा दिएको र जनताले नमागेको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको जस्ता आरोप उनीमाथि अहिले पनि लाग्ने गरेका छन् । वास्तवमा राजालाई दलहरुले धोखा दिएकै हुन् ? नेपाललाई हिन्दू राज्यबाट धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्दा नेम्वाङले धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द घुसाएकै हुन् ? वैशाख ११ को शाही घोषणा विपरित नेम्वाङले पुनःस्थापित संसदबाट ‘नेपाली म्याग्नाकार्टा’ जारी गराएका हुन् ? यी प्रश्नको जवाफ नेम्वाङले जनआन्दोलन दिवसका अवसरमा यसरी दिएका छन् ।